I Hungary dia mamela ny fidirana amin'ireo mpitsidika rosiana vaksiny feno
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » I Hungary dia mamela ny fidirana amin'ireo mpitsidika rosiana vaksiny feno
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana Hongria • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Rosia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Manomboka amin'ny 27 Jolay 2020, ny governemanta Hongroà dia hamela ireo teratany rosiana mitazona mari-pankasitrahana vaksinin'ny COVID-19 hiditra ao amin'ny firenena.
Ny mpitsidika Rosiana dia takiana amin'ny fananana visa Schengen manan-kery sy taratasy fanamarihana momba ny vaksiny.
Ny vaksinin'ny coronavirus Sputnik V any Russia dia voasoratra tany Hongria.
Tsy novaina ny fomba famoahana visa.
Afaka miditra an-kalalahana ireo mpizahatany avy ao amin'ny federasiona rosiana vita vaksiny fanoherana ny COVID-19 Hongria manomboka anio, araka ny fanambarana an-gazety navoakan'ny masoivoho Hongroà any Moskoa.
“Manomboka amin'ny 27 Jolay 2020, ny governemanta Hongroà dia hamela ireo teratany rosiana mitazona taratasy fanamarinana vaksinin'ny COVID-19 hiditra ao amin'ny firenena. Amin'ity tranga ity, ny olom-pirenena rosiana dia ho afaka hiditra ao Hongria tsy misy fameperana, tsy mila fanadinana quarantine sy PCR, raha manana visa Schengen manan-kery sy taratasy fanamarinam-panafody izy ireo, ”hoy ny fanazavana.
Raha ny filazan'ny masoivoho dia tsy novaina ny fomba famoahana visa. Na izany aza, takiana ny hamenoana ilay taratasy fangatahana taratasy fanamarinana ny vaksininy.
Ny vaksinin'i Russia Sputnik V COVID-19 dia voasoratra tany Hongria ary ampiasaina ho ampahany amin'ny fampielezana vaksinim-pirenena.
Talohan'izay, raha te hitsidika an'i Hongria, ny olom-pirenena rosiana dia tsy maintsy nanao fanandramana PCR roa ratsy nandritra ny dimy andro talohan'ny nidirany tamin'ny fahasamihafana 48 ora, na nandalo quarantine roa herinandro.
Filoha lefitry ny Fikambanan'ny mpikarakara ny fizahan-tany ao amin'ny Federasiona Rosiana Dmitry Gorin naneho hevitra momba ny lalàna vaovao momba ny fidiran'ny Rosiana any Hongria, nanamafy fa ny fisokafan'ny firenena no antsoina hoe "lalantsara maintso", izay mety mitaky fanesorana fameperana any amin'ny firenen-kafa.
Bartlett dia nidera ny NCB tamin'ny fandefasana ny Response momba ny fizahan-tany ...